I-neutralization kunye ne-Hydrolysis kwiSetra Formation
Ukuqulunqwa kweTyuwa: Indlela yokuPhathwa kweNgcaciso yokuSebenza
Xa iicidi kunye neziseko zisabela njani komnye nomnye, zingenza ityuwa kwaye (ngokuqhelekileyo) amanzi. Oku kubizwa ngokuba yi-neutralizing reaction kwaye ithatha le fomu elandelayo:
Ngokuxhomekeka kwimizimba yetyuwa, ihlala ifom e-ionized kwisisombululo okanye iyakusombulula isisombululo. Impendulo ye-neutralization iqhubela phambili ekugqibeleni.
Ukutshintsha kwe-reaction ye-neutralization kuthiwa yi-hydrolysis.
Kwindlela yokusabela ngayo i-hydrolysis ityuwa iyancipha ngamanzi ukunika i-asidi okanye isiseko:
Ngokukodwa, kukho idibaniso emine ye-acids ezinamandla nezibuthathaka kunye neziseko:
isisithi esomeleleyo + esomeleleyo, umzekelo, iHCl + NaOH → NaCl + H 2 O
Xa i-acids ezinamandla kunye neziseko eziqinileyo zisabela, le mveliso ityuwa kunye namanzi. I-asidi kunye nesiseko siyancedisa, ngoko isisombululo asiyi kuthatha hlangothi (pH = 7) kwaye i ions ezenziweyo aziyi kuphendulwa ngamanzi.
i-asidi eqinile + isiseko esibuthathaka , umzekelo, iHCl + NH 3 → NH 4 Cl
Ukusabela phakathi kwe-asidi eqinile kunye nesiseko esicuthakathaka kuvelisa ityuwa, kodwa amaninzi awakhiwe ngenxa yokuba iziseko ezinobuthakathaka zivame ukuba zi-hydroxide. Kule meko, i-solvent yamanzi iya kuthatyathwa ngoluhlu lwetyuwa ukuguqula isiseko esibuthathaka. Umzekelo:
HCl (aq) + NH 3 (aq) ↔ NH 4 + (aq) + Cl - ngelixa
NH 4 - (aq) + H 2 O ↔ NH 3 (aq) + H 3 O + (aq)
i-asidi ebuthakathaka + isiseko esomeleleyo, umzekelo, i-HClO + NaOH → NaClO + H 2 O
Xa i-asidi ebuthakathaka iphendukela kwisiseko esomeleleyo isisombululo esiza kuba sisisiseko.
Ityuwa iya kuba yenziwe i-hydrolyzed ukuze yenze i-asidi, kunye kunye nokwakhiwa kwe-ion hydroxide ukusuka kuma-molecule yamanzi ase-hydrolyzed.
i-asidi ebuthakathaka + isiseko esibuthathaka, umzekelo, i-HClO + NH 3 ↔ NH 4 ClO
I-pH yesisombululo esakhiwe yindlela yokusabela ngayo i-asidi ebuthakathaka kunye nesiseko esibuthakathaka ixhomekeke kwizikhwepha ezinxulumene nama-reactants.
Umzekelo, ukuba i-asidi ye-HClO ine-K ye-3.4 x 10 -8 kwaye isiseko se-NH 3 sinesi-K b = 1.6 x 10 -5 , kwaye isisombululo esinomsoco se-HClO kunye ne-NH 3 siya kuba sisisiseko kuba iK I-HClO ingaphantsi kwe-K ye-NH 3 .
Amandla avela kwiFranquency Example Problem
Ukutshintshelwa kweeTires eziphambili kwiC6 Corvette